Nai Nai: Virus ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ
Virus ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ
ကွန်ပျူတာတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ. သမိုင်းတလျှောက် ပြန်လေ့လာကြည်.ရင် ထူးခြားတဲ. ဆောင်ရွက်မှူတွေ၊ တီထွင်မှုတွေကို တွေ.ရပါလိမ်.မယ်၊ ၁၉၈၄ ခုနှစ်ဟာ ကွန်ပျူတာသမိုင်းမှာ ထူးခြားတဲ.နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော. ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ Fred Cohen က ဗိုင်းရပ်စ် ( virus ) ကိုစတင်မှည်.ခေါ်သုံးစွဲခဲ.လို.ပါပဲ။ ကွန်ပျူတာ အဘိဓါန် ထဲမှာလည်း ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ. ဝေါဟာရသစ် တစ်လုံး တိုးပွားစေခဲ.ပါတယ်။
New Haven တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်တဲ. Fred Cohen ဟာ ၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ သုတေသနစာတမ်းတစ်ခုရေးခဲ.ပါတယ်။ အဲင်္ဒီစာတမ်းထဲမှာ သူ.ဘာသာသူပွားယူနိုင်တဲ. ပရိုဂရမ်တွေနဲ. အဲ.ဒီ ပရိုဂရမ်ရဲ. အန္တရာယ် တွေကိုရေးသားခဲ.ပါတယ်။ အဲဒီအန္တရာယ်တွေကို ကြိုတင်သိမြင်ပြီး (National Science Foundation. NSF) ကနေရန်ပုံငွေ စိုက်ထုတ်လို. ကာကွယ်မှုတွေကို စီမံဆောင်ရွက်ထားဖို. ကမ်းလှမ်းခဲ.ပါတယ်။ ကံမကောင်းချင်တော. Fred Cohen ရဲ. ကမ်းလှမ်းချက်ကို NSF ကနေ ခါးခါးသီးသီးငြင်းပယ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအမှားတစ်ခုဟာ အခုထိ ပြင်မရတော.တဲ.အမှားတစ်ခု ဖြစ်ခဲ.ပါပြီ။
အခုအချိန်မှာ Barton Group ရဲ. သုတေသန နဲ.လေ.လာဆန်းစစ်မှုဌာန အကြီးအကဲအအဖြစ် တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေတဲ. Cohen ဟာ အဲဒီအချိန်ကအကြောင်း ပြန်ပြောင်းပြောဆိုရာမှာ “သူတို.ဟာ အဲဒီကိစ္စကို လျှော.တွက်ခဲ.ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ.အလုပ်မဟုတ်ဘူး “ ဆိုပြီး ငြင်းဆိုခဲ.ပါတယ် “ လို.ပြောပြခဲ.ပါတယ်။
နောက်ဆယ်စုနှစ် ကျော်လောက်မှာ ကွန်ပျူတာ သုံးစွဲခဲ.တဲ. ကုမ္ပဏီတွေ တစ်ဦးချင်းသုံးစွဲသူတွေ အားလုံးနီးပါး အဲဒီမှားယွင်းမှူအပေါ်မှာ ကြီးကြီးမားမား ပေးဆပ်နေရပါပြီ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စက်မှု လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံး အမြဲတိုးတတ်ပြောင်းလဲနေတဲ. ဗိုင်းရပ်စ်နဲ. Worm တွေရဲ. ရန်ကို ကာကွယ်ဖို. မနားမနေကြိုးပမ်းရှာဖွေနေကြရပါတယ်။
အင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့် တိုက်ခိုက်လေ.ရှိတဲ.အတွက် ကာကွယ်လုပ်ဆောင်ရာမှာ လက်သည်တရားခံကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးဟာ ရှုပ်ထွေးနက်နဲလှပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေဟာ နှစ်စဉ် ငွေကြေးသန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျနေသလို ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေလည်း ငွေကြေးသန်းထောင်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ထဲမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ဖြစ်စေခဲ.တဲ. ဗိုင်းရပ်စ် နှစ်မျိူးကတော. Sobig နဲ. Slammer တို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်တစ်နှစ် လျော.သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘဲ တိုးလာတာပဲရှိပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ မလိုတမာသူတွေကနေ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပျော.ကွက်တွေ အားနည်းချက်တွေကို အသုံးချပြီး အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် ချိူးဖောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေ့ရှိတာမို. အဲဒီလို တိုက်ခိုက်တာမျိူးမခံရအောင် ကွန်ပျူတာသမားအားလုံး စောင့်ကြပ်စီမံနေရပါတယ်။ ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာကနေဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာမသိဘဲ ခံလိုက်ရတဲ.အချိန်မှသာ ခံရပြီဟေ. လို. သိရှိနိုင်တဲ.အတွက် စီမံဆောင်ရွက်ရတာ နက်နဲခက်ခဲလှပါတယ်။ အဲဒီလို တိုက်ခိုက်ခံရတဲ. အမှုကိစ္စတွေထဲက တချို.တစ်ဝက်ကိုပဲ မှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ.သလို တကယ်.တရားခံအစစ် ဆိုတာကို ရှာဖွေတွေ.ရှိ ဖမ်းမိတယ်ဆိုတာလည်း မရှိသလောက်ရှားပါတယ်။
Cohen ဟာ အနာဂတ်အန္တရာယ်ကို ကြိုတင်သိမြင်နိမိတ်ဖတ်နိုင်ခဲ.ပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ တောင်ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းတတ်နေတဲ.အချိန် ကျောင်းသားဘ၀မှာကတည်းက ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ. ပါတ်သက်ပြီး အရိတ်အမြွတ်ပြောကြားခဲ.ပါတယ်။ အပါတ်စဉ် ကျင်းပတဲ. ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Seminar မှာ System တစ်ခုကနေ တခြား System တစ်ခုဆီ သူ.ဘာသာသူ အလိုအလျောက် ကူးစက်ကော်ပီပွားနိုင်တဲ. ပရိုဂရမ်တစ်ခု ကိုရေးဖို. ခေါင်းထဲမှာ ချက်ချင်းစိတ်ကူးရခဲ.ပါတယ်။ စက္ကန်.ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အဲဒီပရိုဂရမ်ကို ဘယ်လိုရေးရမလဲ ဆိုတာ အတွေးပေါက်ခဲ.ပါတယ် လို. Cohen ကပြောပြပါတယ်။
​ အဲ.ဒီအချိန်မှာ Cohen ကို အကြံဥာဏ်ပေးနေတဲ.သူကတော. Len Adleman ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကလဲ ခေသူမဟုတ်ဘဲ Public Key နဲ. Encryption Key ကို တီထွင်ခဲ.သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Encryption Key ကို RSA (Rirest. Shamir Adleman) လို.ခေါ်ပါတယ်။ Aldeman ကနေ “ ဒါဟာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်” လို. အကြံပြုခဲ.ရာကနေ “ဗိုင်းရပ်စ်”ဆိုတဲ. နာမည် အတည်ဖြစ်ခဲ.ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်နှစ်ထဲမှာရေးသားခဲ.တဲ. Cohen ရဲ. စာတမ်းထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာ ပရိုဂရမ်တစ်ခု ၊ အဲ.ဒီပရိုဂရမ်ဟာ တစ်ခြားပရိုဂရမ်တစ်ခုကို ကူးစက်နိုင်ပြီး ပုံစံအမျိူးမျိူး ပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ.အပြင် သူ.ဘာသာသူ ကော်ပီကူးနိုင်တဲ.ပရိုဂရမ်လို. အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခဲ.ပါတယ်။ Cohen ကနေ ဒစ်ဂျစ်တယ် သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရှယ်ယာလုပ်သုံးစွဲခဲ.တဲ. ဘယ် System မဆို ကူးစက်ပြန်.ပွားနိုင်ကြောင်းနဲ. ဗိုင်းရပ်စ်တွေရဲ.အမူအကျင့် နဲ. သဘောသဘာဝတွေကို ပါ ဖော်ပြခဲ.ပါတယ်။
သူ.ရဲ.ယူဆချက်ကို သက်သေပြဖို.အတွက် စမ်းသပ်တဲ.ပရိုဂရမ်တစ်ခုရေးသားပြီးဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ ဘယ်လောက်ထိ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးစက်နိုင်လဲဆိုတာ လက်တွေ.လုပ်ဆောင်ပြပါတယ်။အဲ.ဒီအချိန်က သုံးစွဲနေတဲ. မိန်းဖရိမ် (Mainframe) ကွန်ပျူတာကြီးတွေရဲ. လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြခဲ.ပါတယ်။ Cohen လိုမျိူးလက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြသတာမျိူးမရှိခဲ.ပေမဲ. သူ.ရဲ. သုတေသနစာတမ်းမတိုင်ခင်တည်းက ဗိုင်းရပ်စ် နဲ.ဆင်တူတဲ. ပရိုဂရမ်တွေ ရှိနေခဲ.ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ.ဒီလိုမျိူးပြောကြားခဲ.သူကတော. ကွန်ပျူတာလောကရဲ.သီအိုရီတွေ တော်တော်များများ ဖော်ထုတ်တီထွင်နိုင်ခဲ.တဲ. ကွန်ပျူတာဘိုးအေကြီး John Von Neumann ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံမှာ ၁၉၀၃ ခုနှစ်ကတည်းက မွေးဖွားခဲ.တာဖြစ်ပြီး ကွန်ပျူတာခေတ်ဦးရဲ. တီထွင်သူတစ်ဦးအဖြစ်ထင်ရှားခဲ.သူ ဖြစ်ပါတယ်
Posted 1:05 AM by Nai Nai in Labels: Virus များအကြောင်း
0 comment(s) to... “Virus ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိ”